Charter Waxbarashada Shirarka
KU SOO DHAWAADA CARUURTA WAXBARASHADA DUGSIGA
Waxaan hada aqbalnaa codsiyada sanad dugsiyeedka 2021/22!
Axdiga barashada Summiter Summit, ardaydeena waxay la kulmaan isku dhaf waxbarasho gaar ah iyo fursado kobcinta nolosha dhabta ah.
Waxaan si khibrad leh u isticmaalnaa ilaha waxbarasho ee ugu fiican si aan u bixinno doorashada manhajka oo aan u abuurno dariiqa waxbarasho ee u gaarka ah arday kasta.
Samaynta iskaashi lala yeesho qoys kasta iyo bartahu waa mudnaanta ugu sarreysa. Ka caawinta arday kasta inuu ku guuleysto waxbarashadiisa waa himiladeenna ugu sarreysa.
Waa waayo-aragnimadeena, ka go'naanshaha guusha ardayda, iyo dhaqankeena taageerada oo kala soocaya Axdiga Wax-barashada Summitaanka.
Axdiga Wax-barashada Summad-weyne waa a waxbarid bilaash ah, si buuxda loo aqoonsan yahay dugsiga dadweynaha ee tooska ah ee fasalada K-12.
Xulashada Dugsiyada Hoose K-5
Qoysas badan ayaa doorta inay ilmahooda ku bartaan guriga. Dugsigeenu wuxuu siiyaa qoysaskan fursado. Barnaamijka Ikhtiyaariyada Dugsiga Hoose ee Summit Learning Charter wuxuu ku faanaa hubinta in waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah ay haystaan ​​aaladaha iyo agabyada lagama maarmaanka u ah inay si guul leh ugu hantaan una bartaan ilmahooda inta ay ku jiraan safarkooda waxbarasho.
Axdiga Barashada Summit wuxuu ku dadaalayaa inuu abuuro jawi waxbarasho shaqsiyeed. Ardayda Summit waxay heystaan ​​ikhtiyaarro - waxaan heysanaa in kabadan 200 oo fasal oo kaladuwan oo dooroshooyinka manhajka ah ah iskuna dhexgale jadwal si wada jir ah ugu habboon arday kasta. La kulan la-taliyaha dugsiga si aad u dhisto dariiq waxbarasho oo adag oo qiimo leh.
Arday kasta wuxuu u qalmaa inuu wax ku barto jawi ku habboon qaabkiisa waxbarasho iyo yoolalka mustaqbalka. Barnaamijka Kulliyada Hore waxa loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah fursadaha ugu guulaha badan Oregon. Ardayda raadineysa khibrad dugsi sare oo gaar ah waa inay si aad ah u tixgeliyaan Barnaamijka Kulliyadda Hore.
“Waan ka qalin jabiyay barnaamijkoodii hore ee kulleejada waana go'aankii ugu fiicnaa ee aan abid sameeyo!”
“Waxaan hadda ka bilownay carruurteenna Shir-weynaha dayrtii hore. Waxaan jecel nahay fursadaha, macallimiinta dhiirrigelinta iyo xirfadda leh iyo wax kasta oo kale! ”
Gabadhayda iyo anigu waan jecel nahay iskuulkan. Waa jawi wanaagsan oo farxad u leh carruurta. Gabadhaydu waa ku faraxsan tahay oo ku faraxsan tahay dugsiga mar labaad. ”